Izinto ezingama-20 zokuThetha ngomhla wokuzalwa wesithandwa sakho - Ubudlelwane Ingcebiso
Ngaphakathi Design Basics
Izinto ezingama-20 zokuThetha ngomhla wokuzalwa wesithandwa sakho
Unemincili yokubhiyozela ukuzalwa kweqabane lakho. Kodwa umenza njani azive ekhethekileyo ngomhla wokuzalwa kwakhe? Kuya kuxhomekeka ekubeni uyaluthanda na usuku lwakhe lokuzalwa. Nokuba kwenzeka ntoni, kukho izinto ezintle onokuzithetha kwisithandwa sakho ngomhla wokuzalwa kwakhe ukuze simenze azive emangalisa.
yimalini eyi-2 yeedola
Zimbalwa izinto onokuzithetha kumfana wakho ngomhla wokuzalwa kwakhe
Zimbini iintlobo zamadoda: abo banandipha imihla yokuzalwa kunye nabo bangayinanziyo. Izinto onokuzithetha kwisithandwa sakho ngomhla wokuzalwa kwakhe zahlukile ngokuxhomekeke ekubeni uluphi uhlobo lomntu. Unokufuna ukuthumela ifayile ye-Ileta yothandookanye ungafuna ukuthumelainto emnandi.Cinga ngobuntu besoka lakho ngaphambi kokuba uthathe isigqibo sokuba uzothini okanye wenze ntoni.
Izinto ezili-10 ezimnandi ukuThetha kwiQabane lakho
Iindlela ezili-10 zokuYila zokuba Ndiyakuthanda
Isikhokelo seZipho zeKhwenkwe
Ambalwa amabinzana awawathetha ngomhla wokuzalwa kwakhe
Amabinzana ambalwa amnandi onokuwathetha okanye izinto oza kuthetha ngazo ukwenza isoka lakho lizive likhethekileyo zezi:
Ndiyakuthandana. Ndiyifumene njani inyhweba yokuba nawe?
Masenze olu suku lube lolona suku lokuzalwa lubalaseleyo kuwe!
Nantsi eminye imihla yokuzalwa kunye!
Ungoyena mntu ndimthandayo ehlabathini kwaye kufanelekile ukuba ube nosuku lokuzalwa olukhulu!
Uthetha lukhulu kum kwaye ndiziva ndisikelelekile ngokuchitha olu suku lukhethekileyo kunye nawe!
Ungumntu omangalisayo! Ndiyamangaliswa nguwe kwaye ndiyaziqhenya ngawe. Enkosi ngokwabelana usuku lwakho olulodwa nam.
Ndingawenza njani lo mhla ukhetheke ngakumbi kuwe?
Ndinosuku olukhethekileyo olucwangciselwe usuku lwakho lokuzalwa kuba ndikuthanda kakhulu!
Ufanelwe kokona kulungileyo ngomhla wakho wokuzalwa!
Umfana Oonwabela imihla yokuzalwa
Kwisithandwa esithanda ukubhiyozela, ungatsho kwaye wenze oku kulandelayo:
Ngokucacileyo, unokumxelela 'usuku lokuzalwa olumnandi,' kwaye umwole kakhulu.
Qhubeka umbize ngokuba yinkwenkwe yokuzalwa imini yonke. Thetha malunga nendlela ekhethekileyo ngayo inkwenkwe yokuzalwa (okanye indoda yokuzalwa, ukuba uziva ukhululekile).
Mxelele zonke izinto ezintle ozithandayo ngaye. Ukusasaza imini yonke kunokuba ubangqubeke bonke kunye, kwaye uqinisekile ukuba uziva ekhethekileyo.
Ukuba usebudlelwaneni obunzulu, usuku lokuzalwa kwakhe kunokuba yindlela elungileyo yokumxelela ukuba ungathanda ukuba ubudlelwane buye phi. Unokuthi, 'Ndiyathanda ukuba kubudlelwane nawe kwaye uyasibona sichitha ubomi bethu kunye.'
Cwangcisa imisebenzi eyonwabisayo kwaye umxelele ukuba unothuselo olukhethekileyo kuye kamva. Ungathi kuye, 'Ndikucwangcisele into entle kamva kwaye andinakulinda ukuba uyibone!'
Unokuthi, 'Ndikuthanda kakhulu kwaye andinakulinda ndikubhiyozele namhlanje!'
Ungamazisa, 'Uthetha lukhulu kum kwaye ndifuna ukuqinisekisa ukuba unomhla wokuzalwa ogqibeleleyo.'
Umfana ongayithandiyo imihla yokuzalwa
Abanye abantu abayithandi nje imihla yokuzalwa. Nokuba ungasithanda kangakanani isithandwa sakho, usenokungafuni ukuba umkhumbuze ngomhla wokuzalwa kwakhe. Izinto ezimbalwa onokuthi kumfana wakho ongazithandiyo imihla yokuzalwa zezi:
Ungamxelelaumthanda kangakanani. Kungakhathaliseki ukuba yiphi imini ethi, 'Ndiyakuthanda,' ihlala iyingcamango enkulu. Unokuthi, 'Ndikuxelele namhlanje indlela endikuthanda ngayo?' Ukuba awuthandani ungathi '... ndikukhathalele.'
Musa mxelele ukuba ngumhla wokuzalwa kwakhe kodwa musa ukuyenza icace into yokuba uzama ukuphepha isihloko.
Ukuba kufuneka uchaze ukuba ngumhla wokuzalwa kwakhe, yibize ngokuba ngumhla wakhe okhethekileyo. Unokuthi, 'Masibe nosuku oluhle kunye kwaye sonwabele olu suku lubalulekileyo.'
Imihla yokuzalwa lixesha elifanelekileyo lokuxoxa malunga nokuba uthetha ukuthini komnye nomnye. Nokuba akabhiyozeli, usenokuchitha ixesha lakho kunye. Unokuthi, 'Ndiyakuthanda ukuchitha ixesha kunye nawe.'
Unokuthi, 'Undonwabisa kakhulu. Ndiyayibulela into yokuba ungumfana omkhulu. '
Kutheni Imihla Yokuzalwa Ikhethekile?
Ngexesha elithile, unokufumana ukubuza ukuba yintoni eyenza imihla yokuzalwa ikhetheke kangaka. Emva kwayo yonke loo nto, wonke umntu unonyaka kwaye amawaka abantu babelana ngolusuku olunye lokuzalwa. Nangona kunjalo, abantu abaninzi baxabisa imihla yokuzalwa njengaphezulu nje kosuku nje olulula lonyaka. Oku kulandelayo zizizathu ezimbalwa zokuba kutheni imihla yokuzalwa ibalulekile:
Ungawukhuphela njani umculo kwi-cd
Wonke umntu uyakhula ngemini yokuzalwa. Xa umncinci, oku kuyonwabisa (ukusondela ekufumaneni iphepha-mvume okanye ukusela) kwaye xa umdala ayonwabisi. Nangona kunjalo, imihla yokuzalwa ibonisa ukwaluphala kwaye wonke umntu ngumntu.
Kwiinkwenkwezi, usuku lokuzalwa (kwiimeko ezininzi) kuphela kwexesha lonyaka xa zonke iiplanethi ziwa njengoko zenzayo ngomhla wokuzalwa komntu.
Uninzi lweenkcubeko lubhiyozela imihla yokuzalwa kunokuba kunjalo ngokuzalwa kwabo.
Imihla yokuzalwa lithuba elihle lokubhiyozela ubudlelwane bakho.
Imihla yokuzalwa inika ithuba lokubonisa ukuba umkhathalele kangakanani umntu.
Imihla yokuzalwa liXesha eliKhulu lokwenza iNkwenkwana eQabane yakho ukuba izive ikhethekile
Ukuba ufunda eli nqaku okanye abanye bayayithanda, mhlawumbi unomdla wokwenza isoka lakho lizive likhethekile kwaye lifunwa. Izizathu ezimbalwa zokuba zibandakanya:
Ukuba ulisoka elihle unyaka wonke, imihla yokuzalwa ikunika ithuba lokubonisa ukuba uthetha kangakanani kuwe.
Ngemihla yokuzalwa, uninzi lwabantu luphathwa ngokukhethekileyo. Ukukhathalela umntu othandana naye kangangoko unakho kukwenza uqhubeke nolu luvo.
Ngoba kutheni? Imihla yokuzalwa sisizathu esihle sokuhlamba isithandwa sakho ngothando!
Imihla yokuzalwa lithuba elifanelekileyo lokwenza intoukuthandana nesoka lakho.
Ungalisebenzisa eli thuba ukumothusa ngokuphatha kunye nemisebenzi ayithandayo.
Zimbalwa izinto onokuzenzela isithandwa sakho ngomhla wokuzalwa kwakhe
Ukuba unomdla kwizinto onokuzithetha kwisithandwa sakho ngomhla wokuzalwa kwakhe, emva koko ufunde iingcebiso ezimbalwa zokwenza umhla nokuba ungcono kuye ngokuqinisekileyo uya kwamkelwa. Eminye intleizinto zokwenza ukuba nesoka lakhousuku lokuzalwa:
Sebenzisa usuku ukwenza izinto azithandayo ngesiqhelo ngekhe uzenze. Umzekelo, 'Sthandwa, ungathanda ukudlala umdlalo wevidiyo owuthandayo imini yonke?'
Mfumanele isipho ekudala asifuna.
Sebenzisa usuku ukwenza into ekhethekileyo kuye njengokumenzela isidlo esizukileyo okanye ukumbhaka ikeyiki. Umzekelo wendlela onokuthi ngayo kuye: 'Ufuna ndikuphekele ntoni - nantoni na oyifunayo, unayo!'
Thatha umsebenzi wokuqikelela ngaphandle kwento ocinga ukuba angathanda kwaye umcele yona nje. Umzekelo, 'Sithandwa, ndingenza ntoni ukuze namhlanje lube lusuku olukhethekileyo kuwe? Ungathanda ntoni?'
Mbuze ukuba kutheni eyithanda imini yakhe ye-b kwaye asebenzise impendulo yakhe ukukunika imikhondo yokumangaliswa kosuku lwe-b. Unokuthi, 'Uthando, ndixelele into oyithandayo malunga nosuku lwakho lwe-b.'
Mvuse ngesidlo sakusasa ebhedini. Unokuthi, 'Isidlo sakusasa sokuzalwa senkwenkwe yokuzalwa!'
Mse kwindawo yokutyela ayithandayo ngesidlo sasemini okanye isidlo sangokuhlwa.
Elona cebo lilungileyo kubo bonke
Eyona nto unokuyenzela isithandwa sakho ngomhla wokuzalwa kwakhe okanye nangoluphi na usuku ngayo nayiphi na into evakala iyindalo kubudlelwane bakho. Hlonipha isibophelelo enabelana ngaso sobabini, kwaye uqinisekile ukuba uziva ukhethekile.
Ukulayita Abaqeshi Ne Engqesho E-Arhente Kunye Size Casual Outfits Ngaphakathi Design Basics Ukufa Kwinkcubeko Ngaphandle Kwehlabathi
Malunga Iindawo Zokuhlala Ne Memorials
Autism Kanye Imfundo
Isebenza Njani ingcebiso ngokwasemtshatweni
Ukuqonda i-Taurus Ascendant
Yintoni iRuby Quartz?
Amagumbi asimahla okuxoxa ngePsychic
I-4 kaJulayi yoyilo lweenzipho
curl eyelashes ngaphambi okanye emva kwemascara
Uyihlambulula njani ipurse purse
yimalini ukufumana ikati exeliweyo
njani ukuba ngumthetho woxolo
zingaphi iinkonzo kwibhotile yewayini